तथ्यांकोवाच : ९ महीनामा रू. ७३ लाखको लौरो आयात | आर्थिक अभियान
काठमाडौं (अस) । स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम आउँदै गर्दा अचेल शहरमा लौरोको निकै चर्चा छ । परन्तु देश लौरोमा पनि परनिर्भर रहेको विषय थोरैलाई मात्र जानकारी छ । विगत दशकमा मुलुकमा लौरोको आयात ठूलो परिमाणमा भएको पाइएको छ ।
नेपालमा आयात हुने लौरोहरू चीन र भारतबाट बढी मात्रामा आउने गरेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालमा लौरो उत्पादन गर्ने उद्योगको सम्भावना रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
तथ्यांकोवाच : ११ महीनामा ५३ अर्ब २५ करोडको भटमासको कच्चातेल आयात [२०७९ असार, २१]
तथ्यांकोवाच : ११ महीनामा रू. ७० अर्ब १३ करोडको खाद्यान्न आयात [२०७९ असार, २०]
तथ्यांकोवाच : रू. १ खर्ब ७५ अर्बको फलाम तथा स्टील र तिनको उत्पादन आयात [२०७९ असार, १९]
तथ्यांकोवाच : नेपालमा रू. १३ करोडको स्टेराइल आयात [२०७९ असार, १७]
तथ्यांकोवाच : रू. ५० करोडको मेडिकल ड्रेसिङ उत्पादन आयात [२०७९ असार, १५]